မြန်မာနိုင်ငံမှာ Mask တွေ အရမ်းဈေးပေါလာခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတရား | CeleTrend
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Mask တွေ အရမ်းဈေးပေါလာခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတရား
Mask ဈေးတွေ မတရား ကျလာတာနဲ့အမျှ ပစ္စည်း အမှန်ရောင်းသူတွေ နေရာမရတော့ဘဲ ဈေးပေါပြီးရော ဆိုတာတွေ နေရာရ လာတာကြောင့် ဒီစာကို ရေးပါတယ်။သာမာန် လူတွေက Technical Detail မသိကြ တာကြောင့်တစ်ပိုင်း၊ သိရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်လို့မရတာကြောင့် တစ်ပိုင်း မို့လို့ ဖြစ်တာဆိုတော့ ဝယ်တဲ့သူတွေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဈေးကွက်ထဲက ပစ္စည်းတွေကို လိုက်မစစ်နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လိုအပ်ချက်လို့ ယူဆပါတယ်။Surgical Mask ဖြစ်ဖို့က ASTM Level 1 Mask ဖြစ်ဖို့ အနည်းဆုံး လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ 0.3 micron ရှိတဲ့ အမှုန်တွေကို ၉၅% ကာကွယ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Particle Filtration Efficiency (PFE) 95% လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိ3Ply Mask တစ်ခု ၂၅၀ တို့ဘာတို့ ဈေးကွက် ထဲရောင်းနေတဲ့ဟာတွေကို ယူပြီး တရုတ်က Lab မှာ စစ်ကြည့်တဲ့အခါ PFE 46.6% ပဲရှိပါတယ်။
ဆိုလိုရင်း ကတော့ ဈေးပေါတာကို စက်ရုံကိုမှာတာမို့ စက်ရုံ က meltblown non-woven fabric ကို ပိုပါးအောင်လုပ်ပြီး ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ဟိုးအရင်တုန်းကလဲ တရုတ်စက်ရုံတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Amoxicillin ကိုတောင် တစ်လုံး ၁၀-၂၀ လောက်နဲ့ ရအောင် မြန်မာနိုင်ငံကိုသွင်းလာတဲ့ ကုန်သည်တွေရှိပါတယ်၊ ဆေးတောင့်အထဲမှာ ဂျုံမှုန့်ပဲ ပါပါတယ်၊ ဘာမှ ဆေးအာနိသင်မှ မပါပါဘူး။ ဆေးတက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ဆရာတွေပြောပြဖူး လို့သိရတာပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဒါမျိုးတွေအများကြီးပါ။နောက်ပိုင်း တရုတ်က ပစ္စည်းမှာတော့လဲ လက်တွေ့သိ လာရတာပါ၊ သူတို့ရဲ့ Minimum Order Quantity (MOQ) ကိုမှီအောင်မှာမယ်ဆို ကွာလတီကိုလိုချင်သလောက် လျှော့ခိုင်းတိုးခိုင်း စိတ်ကြိုက်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ တံဆိပ်ကတော့ တူတူပါပဲ။ တရုတ်စက်ရုံအများစုက Branding နဲ့သွားတာ မဟုတ်ဘဲ OEM ပုံစံနဲ့သွားတာမို့ပါ။ ထုတ်ရုံပဲထုတ်ပေးပြီး ကြိုက်တဲ့တံဆိပ် စိတ်ကြိုက်ရိုက်ပေးတာပါ။အခု Mask ကိစ္စမှာလဲ တကမ္ဘာလုံးမှာ ပြဿနာတက် သွားတာ ဒါကြောင့်ပါ။
Meltblown Non-Woven ရဲ့ မူရင်းကုန်ကြမ်းဟာ တစ်တန်ဈေး နဲ့တွက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဥပမာပေးရရင် – ပုံမှန် တစ်တန်ကို အခု ၁ သိန်းထွက်ရင် ၂ ဆပိုပြီးပါးလိုက်ရင် အခု ၂ သိန်းရမှာပါ။ ၃၀၀ တန်ကို ၂၀၀ နဲ့လိုချင်ရင် သုံးပုံတစ်ပုံ ပိုပြီးပါးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီလိုပိုပါးလိုက်ခြင်းဟာ မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင် မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကို စမ်းနိုင်တဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းကိုပို့ပြီး စမ်းသပ်မှ သိမှာပါ။တစ်ချို့ဆိုင်တွေဆို လည်ပါတယ်။ Quality-A ဆို ၄၀၀၊ Quality-B ဆို ၃၀၀၊ Quality C ဆို ၂၅၀ စသဖြင့် ခွဲရောင်း ပါတယ်။ ဈေးပေါတာကြိုက်တဲ့သူအတွက်လဲ ဈေးပေါတာ၊ ဈေးကြီးတာကြိုက်တဲ့သူအတွက်လဲ ဈေးကြီးတာ စသဖြင့်ပါ။မြန်မာအခေါ် ၃ လွှာအထူ၊ ၃ လွှာအပါး စသဖြင့် ခေါ်ချင် တိုင်းခေါ်နေကြတာပါ၊ ဘယ်လောက်ထူတယ် ဘယ်လောက် ပါးတယ် စစ်နိုင်စွမ်း ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှိမရှိ မသိပါဘူး။ (မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်)
ဒါကြောင့်3ply ဖြစ်ပြီးရော ကောင်းမယ် လုံခြုံမယ် လို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ Surgical Mask လို့ပြောတိုင်းလဲ ကောင်းမယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ တကယ်ကို နားလည်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်သွင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တို့ ကုမ္ပဏီတို့ ဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေလဲ မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ပေါပေ့ ဆိုတာတွေ သွင်းလာတဲ့နောက်မှာ ဈေးတွေကျနေတာကို မင်းတို့က အမြတ်ကြီးစားတာလားဆိုတာရဲ့နောက်မှာ အကုန်ဈေးပေါဖို့ပဲ အာရုံစိုက်လာရတော့တာပါ၊ မရောင်းရဘဲနဲ့တော့ ဘယ်သူမှ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။လက်ရှိကို တကယ့် Surgical Mask အစစ်တွေ Grade အမြင့်တွေဟာ ဈေးအရမ်းကျ မလာသေးပါဘူး။ တရုတ်စက်ရုံတွေကို လှမ်းမေးကြည့်ရင်သိပါတယ်။ ဈေးအပေါဆုံးလို့မမေးဘဲ ကွာလတီပြည့်တဲ့ပစ္စည်းလို့မေးဖို့တော့လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကို လက်ရှိ ၅၀၀ ၆၀၀ ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ ဈေးတင်ရိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကွာလတီကို ကွာတာပါ။ တကယ်တန်း လူနာနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရမယ့် ဆရာဝန်တွေအတွက်တော့ လက်လီရောင်းဈေး ၂၀၀ တန် ၃၀၀ တန်ကို မသုံးသင့်ဘူးလို့ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ ယူဆပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာက ဆေးရုံတွေတောင် ဈေးသက်သာ တာတွေပဲ မှာသုံးနေကြပြီလို့ကြားမိတာပါပဲ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့လဲ (FDA အနေနဲ့) ရောင်းနေတဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေရဲ့ စိတ်ချရမှုကို ဈေးကွက်ထဲမှာ Random Test လုပ်သင့်ပါတယ်။ ရွေးချယ် တာတော့ ဝယ်သူ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သဘောပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ ဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကို အသိရှိအောင်၊ Mask တွေရဲ့ နည်းပညာ အခြေခံကိုသိအောင် ပြောပြတာပါ။
ဒေါက်တာကျော်ကျော်စိုင်း (M.B.,B.S. IM1)
Mask ဈေးတှေ မတရား ကလြာတာနဲ့အမြှ ပစ်စညျး အမှနျရောငျးသူတှေ နရောမရတော့ဘဲ ဈေးပေါပွီးရော ဆိုတာတှေ နရောရ လာတာကွောငျ့ ဒီစာကို ရေးပါတယျ။သာမာနျ လူတှကေ Technical Detail မသိကွ တာကွောငျ့တဈပိုငျး၊ သိရငျတောငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈလို့မရတာကွောငျ့ တဈပိုငျး မို့လို့ ဖွဈတာဆိုတော့ ဝယျတဲ့သူတှအေပွဈမဟုတျပါဘူး၊ ဈေးကှကျထဲက ပစ်စညျးတှကေို လိုကျမစဈနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ လိုအပျခကျြလို့ ယူဆပါတယျ။Surgical Mask ဖွဈဖို့က ASTM Level 1 Mask ဖွဈဖို့ အနညျးဆုံး လိုပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ 0.3 micron ရှိတဲ့ အမှုနျတှကေို ၉၅% ကာကှယျနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ Particle Filtration Efficiency (PFE) 95% လို့လဲ ချေါပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အခုလကျရှိ3Ply Mask တဈခု ၂၅၀ တို့ဘာတို့ ဈေးကှကျ ထဲရောငျးနတေဲ့ဟာတှကေို ယူပွီး တရုတျက Lab မှာ စဈကွညျ့တဲ့အခါ PFE 46.6% ပဲရှိပါတယျ။
ဆိုလိုရငျး ကတော့ ဈေးပေါတာကို စကျရုံကိုမှာတာမို့ စကျရုံ က meltblown non-woven fabric ကို ပိုပါးအောငျလုပျပွီး ထုတျပေးလိုကျတာပါ။ဟိုးအရငျတုနျးကလဲ တရုတျစကျရုံတှေ လုပျလရှေိ့ပါတယျ။ Amoxicillin ကိုတောငျ တဈလုံး ၁၀-၂၀ လောကျနဲ့ ရအောငျ မွနျမာနိုငျငံကိုသှငျးလာတဲ့ ကုနျသညျတှရှေိပါတယျ၊ ဆေးတောငျ့အထဲမှာ ဂြုံမှုနျ့ပဲ ပါပါတယျ၊ ဘာမှ ဆေးအာနိသငျမှ မပါပါဘူး။ ဆေးတက်ကသိုလျတကျတုနျးက ဆရာတှပွေောပွဖူး လို့သိရတာပါ။ ဈေးကှကျထဲမှာ ဒါမြိုးတှအေမြားကွီးပါ။နောကျပိုငျး တရုတျက ပစ်စညျးမှာတော့လဲ လကျတှသေိ့ လာရတာပါ၊ သူတို့ရဲ့ Minimum Order Quantity (MOQ) ကိုမှီအောငျမှာမယျဆို ကှာလတီကိုလိုခငျြသလောကျ လြှော့ခိုငျးတိုးခိုငျး စိတျကွိုကျလုပျခိုငျးလို့ရပါတယျ။ တံဆိပျကတော့ တူတူပါပဲ။ တရုတျစကျရုံအမြားစုက Branding နဲ့သှားတာ မဟုတျဘဲ OEM ပုံစံနဲ့သှားတာမို့ပါ။ ထုတျရုံပဲထုတျပေးပွီး ကွိုကျတဲ့တံဆိပျ စိတျကွိုကျရိုကျပေးတာပါ။အခု Mask ကိစ်စမှာလဲ တကမ်ဘာလုံးမှာ ပွဿနာတကျ သှားတာ ဒါကွောငျ့ပါ။
Meltblown Non-Woven ရဲ့ မူရငျးကုနျကွမျးဟာ တဈတနျဈေး နဲ့တှကျပါတယျ။ ဒီတော့ ဥပမာပေးရရငျ – ပုံမှနျ တဈတနျကို အခု ၁ သိနျးထှကျရငျ ၂ ဆပိုပွီးပါးလိုကျရငျ အခု ၂ သိနျးရမှာပါ။ ၃၀၀ တနျကို ၂၀၀ နဲ့လိုခငျြရငျ သုံးပုံတဈပုံ ပိုပွီးပါးလိုကျရုံပါပဲ။ ဒီလိုပိုပါးလိုကျခွငျးဟာ မကျြလုံးနဲ့ကွညျ့ရငျ မသိနိုငျပါဘူး။ ဒါကို စမျးနိုငျတဲ့ ဓါတျခှဲခနျးကိုပို့ပွီး စမျးသပျမှ သိမှာပါ။တဈခြို့ဆိုငျတှဆေို လညျပါတယျ။ Quality-A ဆို ၄၀၀၊ Quality-B ဆို ၃၀၀၊ Quality C ဆို ၂၅၀ စသဖွငျ့ ခှဲရောငျး ပါတယျ။ ဈေးပေါတာကွိုကျတဲ့သူအတှကျလဲ ဈေးပေါတာ၊ ဈေးကွီးတာကွိုကျတဲ့သူအတှကျလဲ ဈေးကွီးတာ စသဖွငျ့ပါ။မွနျမာအချေါ ၃ လှာအထူ၊ ၃ လှာအပါး စသဖွငျ့ ချေါခငျြ တိုငျးချေါနကွေတာပါ၊ ဘယျလောကျထူတယျ ဘယျလောကျ ပါးတယျ စဈနိုငျစှမျး ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ ရှိမရှိ မသိပါဘူး။ (မရှိဘူးလို့ထငျပါတယျ)
ဒါကွောငျ့3ply ဖွဈပွီးရော ကောငျးမယျ လုံခွုံမယျ လို့ ဘယျသူမှ အာမမခံနိုငျပါဘူး။ Surgical Mask လို့ပွောတိုငျးလဲ ကောငျးမယျလို့ ဘယျသူမှ အာမမခံနိုငျပါဘူး။ တကယျကို နားလညျပွီး မှနျမှနျကနျကနျသှငျးရောငျးတဲ့ဆိုငျတို့ ကုမ်ပဏီတို့ ဖွဈဖို့ပဲလိုပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အဲ့လိုကုမ်ပဏီတှလေဲ မခံနိုငျတော့ပါဘူး။ ပေါပေ့ ဆိုတာတှေ သှငျးလာတဲ့နောကျမှာ ဈေးတှကေနြတောကို မငျးတို့က အမွတျကွီးစားတာလားဆိုတာရဲ့နောကျမှာ အကုနျဈေးပေါဖို့ပဲ အာရုံစိုကျလာရတော့တာပါ၊ မရောငျးရဘဲနဲ့တော့ ဘယျသူမှ မရှငျသနျနိုငျပါဘူး။လကျရှိကို တကယျ့ Surgical Mask အစဈတှေ Grade အမွငျ့တှဟော ဈေးအရမျးကြ မလာသေးပါဘူး။ တရုတျစကျရုံတှကေို လှမျးမေးကွညျ့ရငျသိပါတယျ။ ဈေးအပေါဆုံးလို့မမေးဘဲ ကှာလတီပွညျ့တဲ့ပစ်စညျးလို့မေးဖို့တော့လိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာကို လကျရှိ ၅၀၀ ၆၀၀ ရောငျးနတေဲ့ပစ်စညျးတှရှေိပါတယျ။ ဈေးတငျရိုကျတာ မဟုတျပါဘူး ကှာလတီကို ကှာတာပါ။ တကယျတနျး လူနာနဲ့ တိုကျရိုကျထိတှရေ့မယျ့ ဆရာဝနျတှအေတှကျတော့ လကျလီရောငျးဈေး ၂၀၀ တနျ ၃၀၀ တနျကို မသုံးသငျ့ဘူးလို့ပဲ ကြှနျတျောကတော့ ယူဆပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ဝမျးနညျးစရာက ဆေးရုံတှတေောငျ ဈေးသကျသာ တာတှပေဲ မှာသုံးနကွေပွီလို့ကွားမိတာပါပဲ။ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန အနနေဲ့လဲ (FDA အနနေဲ့) ရောငျးနတေဲ့ဆေးပစ်စညျးတှရေဲ့ စိတျခရြမှုကို ဈေးကှကျထဲမှာ Random Test လုပျသငျ့ပါတယျ။ ရှေးခယျြ တာတော့ ဝယျသူ တဈယောကျခငျြးစီရဲ့ သဘောပါ။ကြှနျတျောအနနေဲ့တော့ ဈေးကှကျထဲမှာဖွဈနတောတှကေို အသိရှိအောငျ၊ Mask တှရေဲ့ နညျးပညာ အခွခေံကိုသိအောငျ ပွောပွတာပါ။
ဒေါကျတာကြျောကြျောစိုငျး (M.B.,B.S. IM1)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် က ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲခန်းက ထွက်လာသလားဆိုတာ ဓာတ်ခွဲခန်းအကြီးအကဲ ပြောပြီ
ကင်ဆာသမားနောက်ဆုံး အဆင့် လူနာက အသက် ရှင်နေသေးတယ်နော်ဆို တဲ့ ကောမန့်ကြောင့် နာကျင်ရကြောင်း ရင်ဖွင့် လာတဲ့ မီးမီးခဲ